China FOTON H7 mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Ngombulelo kuguquko oluphezulu ngokwendlela yoqwalaselo kunye namandla okwahluka, inokuthi yenzelwe ukuhamba kwamadolophu kunye nezothutho. Izixhobo, amandla ombane, ukuqhubekeka kunye nemveliso zenzelwe ukuba zicwangciselwe ixesha elide.
Inqanaba elipheleleyo 7300 * 2230 * 3030 (nge-A / C)
Isondo lamavili 4000
Ukunciphisa Ubunzima 6T
Indawo yokuhlala 21 + 1/23 + 1/25 + 1/28 + 1
I-Foton H7 entsha idibanisa ukusebenza okuphezulu kunye nentuthuzelo, kunye nomgangatho wesandi ngokhuseleko olugqwesileyo. Ugxininiso olukhulu lubekwe kungekuphela kuyilo lwamandla ashukumisayo kunye neempawu zokuqhuba ezibalaseleyo, kodwa ngakumbi ekusebenziseni kakuhle amafutha kunye neendleko zokujikeleza ubomi obuphantsi.
Ngokugqwesileyo PowertrainNgobuchule bamandla obuhlanganisiweyo obuphambili kunye namandla e-R & D aqolileyo, i-Foton 7M yohlobo lwebhasi ineenkqubo ze-powertrain ezibalaseleyo, ezinomsebenzi owandisiweyo weemoto kunye nokusetyenziswa okuphantsi.
Ukusebenza kwesiqalo esikhethekileyo, ngakumbi kubushushu be-ultralow, -40ºC;
Ukungcangcazela okungaphantsi, ingxolo esezantsi yokuqhuba ngakumbi, 7% isezantsi kunezinye iimveliso ezikhuphisanayo;
Ubunzima bufikelela kwi-340kg kuphela, i-15% -60% ilula kunezinye iimveliso ezikhuphisanayo;
Iziphumo zokufikelela kwilitha nganye kwi-33.2kW / L, 10-35% ngaphezulu kunezinye iimveliso ezikhuphisanayo;
I-torque ephezulu ifikelela kwi-600NM, yenziwe kakuhle ekunyukeni kwethambeka.
Ukugcwaliswa kweoyile ngalo lonke ixesha kuyafumaneka
Indlu ye-asi ene-processing ekhethekileyo, ukuqina okuhle kunye namandla aphezulu;
Ukuncitshiswa kokugqibela kokuqhuba ngesakhiwo esihambelanayo, izixhobo ezinamandla aphezulu kunye ne-conditio engcono yokuthambisa;
Ingxolo ephantsi kunye nokusebenza ngokuhanjiswa okuphezulu, ukuqinisekisa ukomelela kwesithuthi kunye noqoqosho.
Ngokusekwe kubuchule obuqolileyo be-chassis yelori, i-Foton ibhasi yenze ucoceko lwe-chassis kulungelelwaniso olufanelekileyo lolwakhiwo lwebhasi:
Ukuthembela kunyuke nge-30% yokwandisa isakhelo se-chassis, ukungqinisisa okukhulu koKhuseleko kukhuthazwa kakhulu Ukufumana ukwamkelwa ngokubanzi kwiimarike zehlabathi.
I-brake yangaphambili yedisk
Ukusebenza kakuhle kokunyanzelwa kobushushu, ukuphucula uzinzo kunye nokusebenza kakuhle kwe-braking yenkqubo yokuqhekeza Isakhiwo esilula kunye nokudodobala okuhle kwe-thermal kunye nokufumana kwakhona ukubola okuzinzileyo ngokhuseleko oluphezulu, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ubomi obude benkonzo
Inkqubo yesilumkiso sokuhamba ngomgaqo (LDWS) elumkisa umqhubi xa isithuthi siqala ukuhamba ngendlela engenanjongo